'ဇာတ်ကားတစ်ကားက ပြန်ရတဲ့ငွေနဲ့ နောက်ထပ် သုံးကားလောက် ပြန်ခွဲပြီးတော့ ရိုက်ရင် အစာလျှော့တဲ?? - Yangon Media Group
‘ဇာတ်ကားတစ်ကားက ပြန်ရတဲ့ငွေနဲ့ နောက်ထပ် သုံးကားလောက် ပြန်ခွဲပြီးတော့ ရိုက်ရင် အစာလျှော့တဲ??
ရန်ကုန်၊ မေ ၂၂
”မုဒြာခေါ်သံ” ဇာတ်ကားရုံတင်ပြသပြီးပြန်ရတဲ့ငွေက ”ဥပါယ်တံမျဉ်”လို ဇာတ်ကားမျိုး သုံးကားလောက်ပြန်ရိုက်လို့ရတယ်လို့ ဒါရိုက်တာခရစ်(စ)တီးနားခီက ပြောပါတယ်။ ”မုဒြာခေါ်သံ” ဇာတ်ကားရုံတင်တုန်းက ဇာတ်ကားကို ပရိသတ်တွေက တော်တော်လေးအား ပေးတာကြောင့် ငွေတော်တော်လေးရလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာရတဲ့ငွေက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ”ဥပါယ်တံမျဉ်”လို ဇာတ်ကားမျိုး သုံးကားလောက်ပြန်ရိုက်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ မရိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့စဉ်းစားတာက ဈေးကွက်ကိုတစ်ကယ်တွန်းတော့မယ်ဆိုရင် ဟိုနေရာလေးကို ခိုလိုက်ပါ၊ ဒီနေရာလေးကိုလျှော့လိုက်ပါဆိုပြီး လုပ်လို့မရပါဘူး။ ကျွန်မတို့လို အနုပညာသမားတွေဘက်ကလည်း ဒီဇာတ်ကားကရတဲ့ ငွေတွေများလို့ နှစ်ကားပြန်ခွဲပြီး ရိုက်တာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားတစ်ကားကို ဥပမာ သိန်းငါးထောင်၊ ခုနစ်ထောင်ရပြီဆိုရင် အဲဒီငွေနဲ့ နောက်ထပ်သုံးကားလောက် ပြန်ခွဲပြီးတော့ ရိုက်ရင် အစာ လျှော့တဲ့ ဟင်းတစ်ပွဲနဲ့အတူတူပဲဖြစ်နေမှာပါ”လို့ ပြောပါတယ်။
ဘယ်နိုင်ငံက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကို အရင်ရောက်တာမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့လည်း ခရစ်(စ)တီးနားခီက ဆိုပါတယ်။ ”ပြည်သူက ရုပ်ရှင်တွေကို ထွက်ပြီးတော့ ကြည့်မှပဲ ဈေးကွက်က ပိုအဆင်ပြေလာမယ်။ကျွန်မတို့ဘက်ကလည်း သစ္စာရှိရမယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း ဇာတ်ကားတွေကို ထွက်ကြည့်ရမယ်။ ဥပမာ အိန္ဒိယကိုပဲကြည့်ကြည့်၊ ကိုရီးယားကိုပဲကြည့်ကြည့် ဘယ်နိုင်ငံမဆို နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ဈေးကွက်ကို အရင်ဆုံးရောက်သွားတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်လူမျိုးက ကိုယ့်အနုပညာကို အားပေးရင်းနဲ့မှ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကို ရောက်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားတစ်ကား ကို ဇာတ်လမ်းမကောင်းလည်းပဲ မင်းသားကိုချစ်တဲ့စိတ်၊ မင်းသမီးကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားကို ကောင်းပါတယ်လို့ဆိုပြီး အားပေးလိုက်ရင် ကျွန်မတို့လိုဒါရိုက်တာတွေ အရမ်းနစ်နာပါတယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ မြန်မာကားမကြည့်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ သူတို့ ဘာဇာတ်ကားတွေ ကြည့်နေလဲဆိုတာကို လေ့လာသင့်ပါတယ်။ သူတို့ကြည့်နေတဲ့ကားတွေ ဇာတ်တွေရဲ့ကွာလတီကို ကျွန်မတို့ကမီအောင် လိုက်နိုင်မှပဲ အဆင်ပြေမယ်”လို့ဆိုပါတယ်။ ဇာတ်ကားတစ်ကားမှာ ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ညွှန်းအပိုင်းက အရမ်းအရေးကြီးပြီး လက်ရှိအခြေအနေမှာ မလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ဖန်တီးနေရ တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
”ယိုးဒယားရုပ်ရှင်ဈေးကွက်တို့ အိန္ဒိယဈေးကွက်တို့က အခြေကျနေတာ လွန်ခဲ့သော ဆယ်လောက်ကတည်းက ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က နိုင်ငံအပြောင်းအလဲမှာ ရုပ်ရှင်ရဲ့ အပြောင်းအလဲပါ ပါသွားပါတယ်။ အဲဒီလိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်ဖို့ အတွက်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ကို ဟိုလိုမရိုက်ပါနဲ့ ဒီလိုမရိုက်ပါနဲ့လို့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ အခုဆိုရင် ကျွန်မ နောက်ထပ်ဇာတ်ညွှန်းရေးဖို့ အကြံတွေမထွက်တော့ပါဘူး။ အရမ်းကို ကြောက်လာပါတယ်။ ဒီလိုရေးလိုက်ရင် ဆင်ဆာမိမှာလား၊ လွတ်လားဆိုတာတွေ စဉ်းစားနေရတော့ အားမရတဲ့စိတ်နဲ့ ဖန်တီးရတာ ကြောင့် ဇာတ်လမ်းက ထွက်မလာပါဘူး”လို့ ပြောပါတယ်။
ခရစ်(စ)တီးနားခီက ဆက်လက်ပြီး ”ကျွန်မတို့ရိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ရုပ်ရှင်ကြည့်သူဟာ ဒီရိုက်ကူးတဲ့သူတွေဘက်က ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်မတို့တွေဘက်က ဘာတွေကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ် ဆိုတာကို သူတို့မကြားချင်ပါဘူး။ သူတို့ ဒီဇာတ်ကားကို လာကြည့်တဲ့ငွေကုန်ရကျိုးနပ်ပြီးတော့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို ကျွန်မတို့ဘက်က ချပြတဲ့အချိန်မှာ ဇာတ်ကားကြည့် နေစဉ်အချိန်တွင်းမှာ Entertaining တစ်ခုခုပေးနိုင်မယ်။ ငိုတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ရယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပေးနိုင်ရမယ်။ အဲဒီလိုမှ အဆင်ပြေမှာပါ”လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
'သီချင်းတွေက စက်ရုံထုတ်ပစ္စည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါကို ရောင်းစားမယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူ ယူဆိုမယ်။ ဒါက သိပ?
ချင်းပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် တစ်ရပ်ဖြစ်သည့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေ ရပ်ဆိုင်းမည်ဆိုသည့် အစီအ
‘အနန္တ’ဇာတ်ကား အတွေ့အကြုံတချို့ကို ပြန်လည်ပြောပြခဲ့တဲ့ စိုးရန်အောင်
Girls’ Generation အဖွဲ့ဝင် သုံးဦး ကုမ္ပဏီနှင့် အဖွဲ့မှ နုတ်ထွက်တော့မည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်
လွှတ်တော်ထဲတွင် စောင့်ကြည့်ရဦးမည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်က ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေကြမ်း တင
ကျေးလက်တေးဂီတ အဆိုတော် ဂျေဆန်အယ်လ်ဒင်းက လာမယ့်တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို ဖျက်သိမ်း